Ampidiro ny Google Earth ao amin'ny Ubuntu 18.04 ary ny derivatives | Avy amin'ny Linux
Ampidiro ny Google Earth amin'ny Ubuntu 18.04 ary ny derivatives
Google Earth dia programa izay manome antsika tontolo virtoaly izay ahafahanao mivezivezy amin'ny toerana rehetra mipetraka eo amin'ny latabatrao mijery sary marobe, miorina amin'ny sary zanabolana, sary an'habakabaka, fampahalalana jeografika avy amin'ny maodely data GIS manerantany ary modely noforonin'ny solosaina.
Azonao atao ny mizaha na aiza na aiza eto an-tany na amin'ny 3D aza ary koa any ankoatry ny tany. Azonao atao ny mijery ny velaran'ny Volana sy Mars, ary mizaha ny kintana amin'ny lanitra amin'ny alina.
Ny programa dia noforonina tamin'ny anarana EarthViewer 3D avy amin'ny orinasa Keyhole Inc, novatsian'ny Central Intelligence Agency. Ny orinasa dia novidian'ny Google tamin'ny taona 2004 nandraoka ilay fampiharana.
Ny fandaharana Hita amin'ny lisansa isan-karazany izy io, fa ny kinova maimaim-poana no malaza indrindra, azo ampiasaina amin'ny fitaovana finday, tablette ary solosaina manokana.
2 Ahoana ny fametrahana Google Earth amin'ny Ubuntu 18.04?
Anisan'ireo singa mampiavaka an'ity programa ity, azontsika atao ny manasongadina fa efa manana sari-tany 3D amin'ny fitambarany. Ary koa, ao anatin'ny vakizoro "Voyager" ao amin'ny Google Earth, afaka mitsidika ireo tranonkala samihafa nambaran'ny UNESCO lova maneran-tany ianao.
Endri-javatra iray hafa amin'ity kinova Google Earth ity ity ny fiasa 'Ho tsara vintana aho', izay miaraka amin'ny tsindry iray monja, dia hitondra ilay mpampiasa mankamin'ny toerana sendra azy ny sehatra amin'ny tanjona hahagaga anao. Rehefa tonga any amin'ny toerana itodiana izy dia manome karatra fampahalalana ho an'ny mpandeha aminao i Google hahafahan'izy ireo mianatra bebe kokoa momba ny zoro izay nitondrana azy ireo.
Fandraisana amin'ny teny anglisy, espaniola, frantsay ary alemà.
Mifandraisa amin'i SketchUp, programa fanaingoana 3D izay ahafahana mampakatra ny maodely 3D an'ny tranobe ao amin'ny Google Earth.
Kitendry fanaraha-maso izay manelingelina ny malina kokoa ary mahazo toerana fampisehoana sary.
Fanatsarana mamela izany jereo ny sary 3D "miloko" (sehatra azo jerena kokoa, varavarankely, biriky ...)
Amin'ny alàlan'ny Google Earth's Mars dia afaka:
Jereo ny sary nalain'i NASA ora vitsy lasa izay tao amin'ny sosona mivantana avy any Mars.
manao fitsidihana ifandraisana any Mars.
Jereo ny maodely 3D an'ny fiara skoto ary araho ny lalan'izy ireo.
Manaova fitsangatsanganana an-tsokosoko amin'ireo toerana misy ny fitobiana, notantarain'ireo mpanamory sambondanitra ny Program Apollo.
Jereo ny maodely 3D an'ny sambo misiona.
Ahoana ny fametrahana Google Earth amin'ny Ubuntu 18.04?
Mametraka Google Earth amin'ny solo-sainay mila mametraka fiankinan-doha aloha isika ilaina amin'ny fampiasana ny rindrambaiko amin'ny solosaintsika. Ireto misy ireto manaraka ireto dia hotadiavinay miaraka amin'ny fanohanan'ny Synaptic:
Na raha tianao azonao atao izany avy amin'ny terminal miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Na dia 64-bit aza ny sampana lehibe an'ny Ubuntu, dia manohy manohana ireo rafitra 32-bit ny derivatives toa an'i Xubuntu na Kubuntu, koa zarainay ihany koa ny fiankinan-doha amin'ireo rafitra ireo
Ho an'ny tranga rafitra 32-bitAlohan'ny hanombohana ny fomba fanao, apetraho ireo tranomboky 32-bit izay ilain'ny programa amin'ny alàlan'ny fanoratana ity baiko manaraka ity ao anaty terminal.
Vitao izao raha misintona ny fiankinan-doha amin'ny:
Izao dia mila mandeha amin'ny tranokala ofisialin'ny tetikasa fotsiny isika ary misintona ny fonosana deb izay atolotray antsika, ny rohy izany.
Vantany vao vita ny fisintomana dia afaka mametraka ny rindranasa miaraka amin'ny mpitantana fonosana tianay izahay na raha tianao ny manokatra terminal ary manao izao baiko manaraka izao:
Raha ilaina dia apetaho amin'ny alàlan'ny baiko ny fiankinan-doha amin'ny programa.
Ary amin'izany dia apetrantsika ao amin'ny rafitray ny programa, tsy maintsy mitady azy io ao anaty menio fampiharana fotsiny isika, tsy maintsy tadidin'izy ireo fa afaka mampiasa ny 7 andro malalaka natolotr'i Google hizaha toetra ny asany izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ampidiro ny Google Earth amin'ny Ubuntu 18.04 ary ny derivatives
Skorpian dia hoy izy:
"Google Earth dia programa izay nosedraina ..."
Heveriko fa lesoka nateraky ny autocorrect, saingy tokony hametraka "manome" izy io.
Valiny tamin'i Eskorpio
Cosme guevara dia hoy izy:
Salama, nataoko ny dingana rehetra hametrahana ny Google Earth ao amin'ny Ubuntu 18.04, ity ny Icon fa tsy azoko atao ny mihazakazaka, misaotra sy arahaba.
Valiny tamin'i Cosme Guevara
Pako dia hoy izy:
Misaotra amin'ny lahatsoratra !! Nanaraka ny dingana aho ary mandeha tsara.
Valiny tamin'i Pako
Adolfo Hernandez dia hoy izy:
Ny adiresin'ny fiankinan-doha dia manome Error 404, tsy hisy fomba hijerena azy io intsony
Valiny tamin'i Adolfo Hernández
Ampidiro VirtualBox amin'ny Ubuntu 18.04 LTS sy ny derivatives